Shir ka dhacay Baardheere oo lagu kala tagay iyo halka uu marayo qorshaha DF – Hornafrik Media Network
Shir ka dhacay Baardheere oo lagu kala tagay iyo halka uu marayo qorshaha DF
Waxaa natiijo la’aan ku soo dhamaaday kulan shalay magaalada Baardheere ee gobalka Gedo ku dhaxmaray saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka baxay Muqdisho iyo maamulka degmada Baardheere ee maamulka Jubbaland.
Kulankaan ayaa ahaa mid guddoomiye Ismaaciil Qorrax oo dhawaan loo magaacabay Baardheere looga dalbanayay in uu la shaqeeyo dowladda Soomaaliya, halka uu hadda ku xiran yahay Axmed Madoobe ,sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil kulanka qayb ka aheyd.
Sidoo kale waxaa jirta warar sheegaya in Guddoomiyaha loo sheegay in haddii uusan la shaqeynin dowladda uu ku khasaari doono rajadiisa gobalka Gedo oo dhawaan ay ka billaaban doonaan howlgalo laga hagayo Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Alqaadi uu ku dhawyahay in uu ka tanaasulo la shaqeynta Jubbaland islamarkaana uu taageero dowladda Soomaaliya oo wadahadalo kula jirta dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa soo sheegaya in ay halkaasi ka socdaan kulamo gaar gaar ah oo ku saabsan xaaladda gobalka Gedo, gaar ahaan xaaladda Baardheere ee gobalka Gedo, balse waxaa la ogeyn halka ay wax ku dambeyn doonaan.
Baardheere waxaa dhowaan gaaray ciidamo dowladda ay ka dirtay Muqdisho, oo doonaya inay awood kula wareegaan magaalada, haddii wada-hadallada xal lagu gaari waayo.
Dowladda Mareykanka oo dalkeeda ka ceyrisay 21 Sacuudiyaan ah